Khatarta babuurta qaadka la yaacda(Hadhwanaagnews) Wednesday, August 01, 2012 Salaaaam shebakada Hadhwanagnews, Iyada oo dhibaatada qaadku ku hayo bulshada la liitey ayaaSalaaaam shebakada Hadhwanagnews, Iyada oo dhibaatada qaadku ku hayo bulshada la liitey ayaa waxa ku darsamey in baabuurta qaadka sidaa ay jiidhaan dad iyo xoolaba.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Inamada wada babuurta qadka amar bay ka sitaan ina afdiinle iyo ina Gafane oo ah in ay xawliga uugu dheer ku eryaan baabuurta oo wixii ay jiidhaana halkii magta qofka wax jiidha reer kooda laga qaadi jirey waxay darawaliinta kula heshiiyeen in ay iyagu ka bixinayaan magta ay soo hooyaan. Habka ay u bixiyaana waxa weeye qaadka
ayuun bay lacag yar dhowr maal mood ku kordhiyaan ilaa laba dollar geedka qaada oo dadka aya bixiya magta iyagoon is ogeyn. Hadaba Qaad walayaashi waa weynaa waxay noqdeen dowlad gooniya oon cidi xukumin. Xitaa Hargeisa dhex deeda markey marayaan waxay u wadaan sidii oo ay wada banana heystaan oo cidna kama duwaan
intaa waxa u sii dheer qeylada hornka babuurka.
Arinka uugu foosha xumi waxa weeye in marka shil dhaco mulkiilaha qaadku uu laaluusho police ka oo qaladka la saaro qofkii dhintey.
Dowladii waxan nidaam u sameyn lahayd ee dadkan maalin kasta la jiidhayo bad baadin lahad meedey?
Gabay Ahmed Ismail Deria ( Qaasin ) tiriyey baa waxa ka mid ahaa baitkan: Dambi ku hadli maayee ma arag dawladaan rabayee,
Yaxye Zakariya yaxyez@yahoo.com